[RASMI] xidhmo dr.fone - Data Android kaabta & celi: Xulo Exaport iyo celi
dr.fone xidhmo - kaabta Data Android & celi
Furfurmi ee kaabta iyo soo celinta Android Data
Xulo xogta Android gurmad in computer la mid click.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo ka mid ah qalabka Android celin gurmad.
Taageerada 8000+ qalabka Android.
Iyada oo xidhmo dr.fone - kaabta Data Android & celi, kor u taageerto iyo soo celinta xogta Android aad weligii eaiser.
xidhmo dr.fone - kaabta Data Android & celi kuu ogolaanaya in aad si fudud u gurmad ku dhowaad dhammaan noocyada macluumaadka ay ka mid yihiin jadwalka, wac taariikhda, gallery, video, fariimaha, xiriirada, audio, codsiyada iyo xitaa xogta codsiga (qalabka rujin). Waxaad sidoo kale ku eegaan karo iyo eegista dhoofin nooc kasta oo xogta aad rabto. Barnaamijku wuxuu sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si fudud u soo celiyo data si ay qalab aad mar kasta oo aad u baahan tahay inaad.
Your Android kaabta la One Click
dr.fone xidhmo - Android Data kaabta & celi aad u ogolaanaya in ay gurmad xogta in computer in kaliya hal click aan overwriting wixii xog ah ee jira. Barnaamijku wuxuu kaloo ku siinayaa awood u gaar ah si aad u eegto waxyaabaha ku jira faylka gurmad oo dooro oo dhan alaabta ama waxyaabaha qaar ka mid ah in aad rabto in aad si loo soo celiyo.
Isticmaal gurmad xogta Android iyo qalab loo soo celiyo, waxaad samayn kartaa gurmad ah oo dhamaystiran xogta oo dhan on qalab aad oon ku hayo xogta ammaan.
files kaabta laguuma bedeli doono
Waxaad samayn kartaa wakhti kasta gurmad aad rabto iyo dhammaan faylasha gurmad waa aamin, oo aan la cusboonaysiin karo si kasta oo marka aad samayn gurmad ah Android.
Si fudud u arkaan waxyaabaha gurmad Android iyo soo celiyo data eegista
Tani gurmad xogta Android iyo soo celinta software kuu ogolaanaya in aad ku eegaan faahfaahinta oo dhan files raad raac iyo dooran files aad rabto in aad soo celiso qalabka.
apps iyo xogta app ee kaabta
Waxaad isticmaali kartaa this gurmad xogta Android iyo soo celin gurmad apps iyo xogta app (qalabka rujin).
data android kaabta in tayada sameecadda
Iyada oo ay taasi gurmad xogta Android iyo soo celiyo barnaamijka, waxaad noqon kartaa hubiyo in aad marnaba lumin doonaa mid ka mid ah macluumaadka ku saabsan qalab aad.
9 nooc file waxaa taageera
The gurmad xogta Android iyo soo celinta software waxaa loo isticmaali karaa si ay gurmad iyo soo celinta xiriirada, fariimaha, wac taariikhda, taariikheed, gallery, audio, video, codsiga iyo xitaa xogta codsiga (inkasta oo kaliya qalabka geelaa)
8000+ qalabka waxaa taageera
Waxa ay taageertaa qalabka Android ugu caansan ay ka mid yihiin Samsung, Sony, LG iyo ilaa 8000 tusaalayaal kale. Liiska dhawra si sii kordhaysa fursadda in in qalab aad waxaa lagu taageeray. Hubi more >>
Tani gurmad Android iyo soo celiyo barnaamijka si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
ka kaabta Files Celinta Data
Sida for files raad raac ah, aad ku eegaan karo dooro macluumaadka aad rabto in aad si loo soo celiyo. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad soo celin kartaa xog gurmad ah qalab kale in qalab aad.
Kaabta iyo soo celin xog ku saabsan qalabka Android aad si fudud.
Data Android kaabta & celi Works for Most Android Qalabka
HUBI THE LIISKA MUUQAALKA faahfaahsan OF AALADAHA taageeray >>
data Codsiga (qalabka rujin)
Android 6.0 iyo hore
data Android gurmad iyo soo celinta waa wax soo saarka aad u fiican oo ah waxaan la yaabey sida badan ayaa igu waanisay meesha aan mahad hanad kii aasaasay aad iyo qadarin oo dhan iyo mahad.
Barnaamijkan waxa loo ogol yahay ii badbaadiyo badan oo xusuus weyn!
Waa sidaas helpfull ii in ay gurmad xogta Android my.
Samsung Auto kaabta
Best shawladda kaabta Android iyo Solution kaabta
Samsung Account ee kaabta: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid
Top 12 Best Apps ee kaabta Android 2016
Top 10 Services kaabta Samsung Cloud
Guide Full soo celinta Phone Android
5 Siyaabaha kaabta Android App iyo Data App fudud
5 Siyaabaha kaabta Android si ay PC fudud
Top 9 softwares Inta badan faa'iidada leh ee kaabta Samsung